Muuri News Network » Muxuu Jurgen Klopp Ku Qoray Warqadii Uu Daniel Sturridge Ugu Dhex Diray Garoonka Dhexdiisa Ee Kulankii Southampton Iyo…
Muxuu Jurgen Klopp Ku Qoray Warqadii Uu Daniel Sturridge Ugu Dhex Diray Garoonka Dhexdiisa Ee Kulankii Southampton Iyo…
Jan 12, 2017 - Comments off
Liverpool ayaa guuldaro kala soo laabatay kooxda Southampton ee kulankii lugta h–e ee Leaque Cupka waxayna Southampton kulanka lugta labaad ee afar dhamaadka Leaque Cupka ay soo booqan doontaa Anfield markaas oo ay Reds isku dayi doonto in ay dhinaca kale u dhigto natiijada guuldarada ahayd ee ay Saints kala soo kulantay.
Laakiin dhamaadkii kulankan Jurgen Klopp ayaa fariin qoraaal ah oo warqad uu ku qoray u diray Daniel Sturridge kaas oo si falcelin si uu layaab ah kaga jawaabay warqada uga timid kursiga kaydka kooxdiisa. Sturrdige ayaa si cadaan ah kulankan ugu fashilmay inkasta oo uu ku soo bilawday shaxda Klopp.
Waxaa lays waydiinayay waxa warqadan ku qornaa ee uu Sturridge ula yaabay isaga oo waliba tusay ciyaartoyda kooxdiisa ee Adam Lallana iyo Emre Can ka hor intii aanu sii akhrisan isaga oo dhinaca kale kubbada ka ciyaarayay wuxuuna ugu danbayn ku tuuray cidhifka garoonka.
Khabiirka Sky Sports ee Jamie Redknapp ayaa qiyaasay fariintii uu Klopp garoonka ugu dhex diray Sturridge wuxuuna sheegay in uu ka dalbanayay in uu orod badan sameeyo oo maadaama oo uu aanu samayn orod fiican wuxuuna yidhi: “Marka uu qoraalkaasi yimaado, waxaan filayaa in lagu yidhi: ‘Daniel kaliya in ka badan orod oo ku wareeg!. Isagu wax ku filan muu samayn”.
Laakiin markii uu kulankii Saints soo dhamaaday ayaa Klopp wax laga waydiiyay fariinta uu u qoray Sturridge wuxuuna yidhi: “Laga yaabee in ay soo yara daahday. Waxaanu warqada bixinay markii ay ciyaartu sii dhamaanaysay taas ayaa ahayd qaladkayaga. Taasi may ahayn niyadjab, waxay ahayd ka fikirida in aad haysto fursada, intaas ayay hayd”.
Klopp ayaa hadalkiisa sii raaciyay: “Nin noocee ah ayaan ahaan lahaa haddii aan fadhiyi lahaa meel ka baxsan oo aanu si fiican u ciyaarno, waxaan filayaa in aan noqon lahaa tababare layaableh? Taasi lama mid aha tan, waxaanu isku daynay inaanu caawino, waxaanu ka fikrnay in aanu samayno garbaha weerarka oo dhab ah, aad u sareya oo difaacyadooda baalaha ku adkeeya in ay difaacan karaan”.